Manampy sanda fanampiny amin'ny fanontana - Intec Printing Solutions Ltd
Lasa mpiara-miasa amin'ny Intec
Politika & fanambarana
Manapaka & miforitra
Foiling, lamination & holografika
Mpanonta printy loko nomerika
Efitrano fampirantiana virtoaly
Mitadiava vokatra amin'ny modely
Mpamily sy fisintomana
ColorSplash mpampiasa boky fiteny iraisam-pirenena
Workflow & fitantanana loko
Ireo singa mifandraika amin'ny LPS215
Misoratra anarana vokatra vaovao
Fanohanana video 'Ahoana'
Warranty & fiverenana
MSDS - fahasalamana sy fiarovana
birao foibe UK
Rafitra fanapahana nomerika
Modely isan-karazany mifanaraka amin'ny fampiharana sy ny vokatra
Foiling & laminating rafitra
Manampia vokatra premium miaraka amin'ny foil toner, laminate ary sarimihetsika holografika
Rafitra fanontana loko nomerika
Mpanonta printy ho an'ny kanto sary modular, famaritana avo lenta
Digital die cutters | Foiler & laminators
Mpanonta printy nomerika
Intec dia ivon'ny fanavaozana sy famolavolana britanika ho an'ny indostrian'ny fanontana sy ny famaranana manerantany nanomboka tamin'ny 1989 ary nitombo ho lasa mpamatsy vahaolana tokana ho an'ny mpanonta nomerika, foiler ary fitaovana fanapahana.
Safidy vahaolana die-cutting sy oroka ho an'ny fampiharana isan-karazany manomboka amin'ny fonosana ka hatramin'ny etikety. Flatbeds sy ny auto-feed rafitra fanapahana, raharaham-barotra karatra milina fanapahana sy ny taratasy manokana nomena oroka-manapaka rafitra fanapahana marika.
Desktop sy fitaovana maimaim-poana roa vita amin'ny foiling sy lamination matihanina, natao hanomezana vahaolana an-trano mora sy ilaina amin'ny fampidirana foil metaly, laminate ary vokatra holografika.
Ampio mora foana ny vita vita amin'ny premium sy ny fiantraikany manaitra amin'ny taratasy vita pirinty.
Mpanonta printy nomerika malaza sy takatry ny saina, manohana karazana media maro samihafa. Ny isan-karazany dia misy, safidy modely loko 4 ho an'ny fanontam-pirinty karatra fohy & antonony, fonosana, sora-baventy, etikety, valopy, fampitaovana fampitaovana ary maro hafa.
Jereo ny kilasy Intec ankehitriny.
Jereo sy alaivo ny bokikely vokatra.
Jereo ny horonan-tsary momba ny vokatra.
Aza raisina fotsiny ny teninay - izao no lazain'ny mpanjifanay - kitiho ny fandalinana tranga.
Ny Intec ColorFlare dia mitahiry vola antsika ary mitondra orinasa vaovao mampientanentana ho an'ny orinasa mpanao pirinty ara-barotra efa ela.
Nanampy tamin'ny fanovàna ny orinasanay tamin'ny fampitomboana ny vokatra sy ny famoronana fahafahana vaovao ny mpanapaka fisaka ColorCut anay.
Lova milalao karatra
Afaka mamokatra prototype tokana na santionany iray manontolo mihitsy aza isika, haingana sy araka ny fangatahana - miaraka amin'ny fahatokisana ny kalitaon'ny asa.
Mila fanohanana lavitra avy amin'ny Intec ve ianao?
Mahazoa fanampiana avy hatrany avy amin'ny manam-pahaizana ara-teknika Intec - hizara ny efijery anao amin'ny alàlan'ny TeamViewer izahay ary hamaha izay olana mety hitranga amin'ny fitaovanao Intec. Antsoy aloha ny Intec mba hampihodina ny baolina.
Mangataha fanampiana amin'ny alàlan'ny TeamViewer
Intec UK foibe:
Momba ny Intec
Intec dia orinasa manerantany, manana birao any UK sy Etazonia, manohana tambajotran'ny mpivarotra manerana an'izao tontolo izao. Niorina 30 taona mahery lasa izay, ny Intec dia nohajaina fatratra noho ny vokatra azo itokisana, matihanina, manam-pahaizana manokana natao manokana ho an'ny indostrian'ny fanontana sy sary. Vakio ato ity. Vakio ny fomba 'manao fiovana' amin'ny alàlan'ny Intec asa asa fanasoavana.
Ny antsipirian'ny fisoratana anarana orinasa
Lasa mpiara-miasa Intec
Mifandraisa amin'ny Intec UK
Misoratra anarana amin'ny pejy Newsletter ho isan'ny voalohany mahazo vaovao.
Maninona raha misoratra anarana amin'ny gazetiboky Intec alohan'ny handefasana mailaka anay - ary mahazo fidirana amin'ny…